पाइलट हुने सपना बोकेर काठमाडौं गएको थिएँ: अभिनेता आकाश श्रेष्ठ :: नारायण खड्का :: Setopati
'पोजेटिभ कमेन्टले ऊर्जा दिने गर्छ, नेगेटिभलाई म शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्छु'
दाङ, कात्तिक ५
दाङ तुलसीपुरका स्थायी बासिन्दा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ तुलसीपुरमै जन्मे, हुर्के। सानोमा तुलसीपुरको तुलसी बोर्डिङ पढे। पछि तुलसीपुरकै राप्ती विद्यामन्दिर बोर्डिङबाट एसएलसी गरे। यो २०६५ सालको कुरा थियो। थोरैले डिस्टिङ्सन नपुगे पनि राम्रो नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गरे।
दिदीको विवाह भइसकेको थियो। परिवारमा एक्ला छोरा आकाश प्लस टु पढ्न काठमाडौं गए। भविष्यमा पाइलट बन्ने उनको सपना थियो।
‘पाइलट हुने सपना बोकेर काठमाडौं गएको थिएँ तर पाइलट पढ्नको लागि आवश्यक खर्च नहुँदा सपना पूरा भएन,’ त्यो क्षण सम्झँदै उनले भने।
पाइलट पढ्नका लागि आवश्यक खर्चको जोहो हुन सकेन। उनी लिटिल एन्जल्समा भर्ना भए। प्लस टुमा म्यानेजमेन्ट पढे। बिबिएबाट ब्याचलर गरे। भर्भराउँदो उमेर थियो। चकलेटी अनुहार। कलेजमा उनका थुप्रै साथी बने।
एक दिन आकाश साथीसँग मिलेर काठमाडौं बाहिर डुल्न निस्के। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफू र साथीहरूका पनि तस्बिरहरू पोष्ट गरे। त्यसपछि भने उनको जीवनमा नसोचेकै भयो। फेसबुकमा राखेको तस्बिर देखेर उनलाई धमाधम मोडलिङको अफरहरू आउन थाले।
‘त्यही नै मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि मैले दुई वर्ष जति मोडलिङमा काम गरे।’
यो आज भन्दा सात वर्ष पहिलेको कुरा हो। सन् २०१४ योगेश लिम्बुको ‘अंगालन’ भन्ने गीतबाट उनले सांगीतिक क्षेत्रमा पहिलोपटक पाइला टेके। पहिलोपटक क्यामेरा अगाडि काम गर्दा निकै गाह्रो भएको अनुभव उनले सुनाए।
‘मलाई कुनै आइडिया थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो गीत गर्न चार दिन जति लागेको थियो। जसो तसो काम सकियो।’ गीत सार्वजनिक भएपछि आकाशको कामको धेरैले प्रशंसा गरे।
‘राम्रो काम भनेर कसैले प्रशंसा गरिदिँदा मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही हौसलाले म अझै यो भन्दा राम्रो काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै गएँ।’
त्यसपूर्व उनले कहिल्यै अभिनय गरेका थिएनन्। अभिनय थिएटरमा पुगेर कहिल्यै सिकेनन्। कामले काम सिकाउँछ भने जस्तै भयो। थोरै थोरै र सानो सानो काम गर्दै उनले अनुभव बटुल्दै गए। अभिनय सिक्दै गए।
‘एबिसिडी सिक्दै जेटसम्म पुगिन्छ नि त,’ उनले भने, ‘सुरूमै जेट सिक्न थाल्यो भने त फेल खाइन्छ नि।’
अब उनको मन मोडलिङ क्षेत्रमै रमाउन थालिसकेको थियो।
यो बीचमा उनले सकारात्मक नकारात्मक दुबैथरि मानिस भेटे। कतिले काम सकेपछि रकममा फेरि बार्गेनिङ गर्न थाल्थे। कतिले तपाईं मेरो गीतमा पैसा लगानी गरे मोडलिङ गर्न चान्स दिन्छु भन्ने गर्थे। तर, उनले त्यस्तालाई वास्ता गरेनन्। लगानी गरेर वा पारिश्रमिक बिना काम आफूले कुनै काम नगरेको उनी बताउँछन्।
मोडलिङमा चर्चा बटुल्दै गएपछि उनलाई सिनेमा हिरोको अफर आउन थाले। कति आएर भेट्थे। तर, त्यसमध्ये धेरैले लगानीको कुरा गर्ने गर्थे।
सुरूमा उनलाई ‘म त तिम्रै हुँ’ भन्ने चलचित्रमा काम गर्ने अवसर मिल्यो।
आकाशका अनुसार म्युजिक भिडिओमा काम गर्नु र चलचित्रमा काम गर्नु धेरै नै अन्तर हुन्छ।
‘म्युजिक भिडिओ दुई चार दिनमै सकिन्छ र त्यसपछि टाउको दुख्दैन,’ आकाशले भने, ‘तर, चलचित्रमा थुप्रै मेहनत पर्छ, ठूलै टिम हुन्छ। त्यो सबैलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न सक्नुपर्छ र सबैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आकाशले सुरूमा काम गर्दा कला क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान शून्य भएको बताए।
‘टेक्निकल्ली होस् वा एक्टिङका दृष्टिकोणले, मलाई क्यामेरा फेस गर्ने तरिका केही पनि थाहा थिएन,’ आकाशले भने, ‘अनमोल केसीको मम्मी प्रोड्युसर सुस्मिता केसीले मलाई सेटमा उभ्याउँदा मलाई अब के गर्ने भनेर, केही कुरा पनि थाहा थिएन।’
तै पनि उनले हिम्मतले काम गरे। बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गए। संघर्ष गरे। सिनेमाको काम सक्न ५५ दिन जति लाग्यो।
‘म धेरै पटक लडें र त्यसपछि फेरि उड्न सिकें,’ उनले भने, ‘आज पनि म संघर्षको मैदानमै छु। अझै धेरै कुरा सिक्दै छु।’
आकाशले ‘ड्रिम गर्ल’, राम कहानी, सम्हालिन्छ मेरो मन’ जस्ता चलचित्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।
दुई वर्ष पहिले काम सकेको ‘सम्हालिन्छ मेरो मन’ भने कोभिड–१९ का कारण रिलिज भइनसकेको र आफूहरू आफ्नो काम हेर्न निकै आतुर रहेको आकाशले बताए।
‘त्यसमा हामीले निकै समय लगाएर र धेरै मेहनत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो सिनेमामा आफ्नो काम हेर्न निकै हतार छ।’
कोरोना महामारीको समयमा चलचित्र उद्योग ठप्प रहँदा आकाशले म्युजिक भिडिओमा ब्यस्त बनेको बताए।
‘म्युजिक भिडिओको लागि अफर त कति आउँछ कति,’ आकाशले भने, ‘तर, टिम हेरेर र गीतको भाव हेरेर मात्रै काम गर्छु।’
आकाशका अनुसार उनलाई चलचित्रको काम गर्न मन पर्छ। तर, त्यसै बस्नुभन्दा म्युजिक भिडिओमा काम गर्दा पनि नयाँ नयाँ कुरा जान्न र अनुभव गर्न मिल्ने उनले बताए।
आज आकाशको फ्यान फलोर्स हजारौं छन्। फुर्सदमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कामबारे सर्वसाधारणले गरेका कमेन्ट पनि पढ्ने गरेको उनले बताए।
भने ‘पोजेटिभ कमेन्टले ऊर्जा दिने गर्छ, नेगेटिभलाई म शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्छु। त्यो सायद कुनै पनि मानिसको उसको स्वभावको बिम्ब हो। तर, म नेगेटिभ कुराहरूको उति वास्ता गर्दिनँ र पछि लाग्दिनँ।’
आकाशले आफूले राम्रो गरे पुग्ने र अरूका पछाडि लागेर आफूलाई पनि नराम्रो बनाउनतर्फ लाग्न नहुने तर्क गरे।
‘सबैलाई खुसी पार्न पनि अलि गाह्रै छ, त्यो हाम्रो दायित्व पनि हैन,’ उनले भने, ‘आफूले वेष्ट गर्ने हो र त्यसैले सबै खुसी हुन्छन् भन्न कहाँ सकिन्छ र ?’
आज उनका बुवा आमा पनि आकाशको सफलता देखेर दंग छन्।
‘आमा बुवाले तिम्लाई जे सही लाग्छ त्यही गर, तर, गलत कहिल्यै नगर भन्ने गर्नुहुन्छ,’ आकाशले भने।
पाइलटको सपना छोडेर बिल्कुलै अलग दुनियाँमा प्रवेश गरेर सही वा गलत के गरेजस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘त्यो कुरा समयले बताउने छ। समयले जुन ठाउँमा मलाई पुर्‍याउने छ, त्यही अनुसार हुनेछ। हामीले समयलाई फेर्न सक्दैनौं। समय जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आकाश कर्मसँगै भाग्यमा पनि उत्तिकै विश्वास गर्ने गर्छन्।
२७ वर्षीय आकाशको काठमाडौंमा आफ्नै घर छ। घरमा कोही सहयोगी नराखेको र आफ्नो खाना आफैं बनाउने गरेको उनले बताए।
परिवारको एक्लो छोरा भएपछि घरमा बुवा आमाले बिहेको कुरा गर्नुहुन्न ? भन्ने प्रश्नमा आकाशले भने- बुवा आमाले त्यो भन्दै आइरहनुहुन्छ। तर म अहिले व्यस्त छु र बिहे हतारमा गर्ने कुरा नभएको बताउँछु।जन्म र बिहे भन्ने कुरा माथिबाट भगवानले तय गर्नुहुन्छ। म भाग्यसँगै समयमा बढी विश्वास गर्छु।’
घरमा एक्लै भएको समयमा अधिकांश समय मूभि हेरेर बिताउने गरेको उनले बताए।
‘म नेपाली, हिन्दी, इङलिस सबै फिल्म हेर्छु,’ उनले भने ‘तर, मलाई बढी जसो एक्सन मूभिहरू हेर्न मनपर्छ।’ त्यसबाहेक एक्लै हुँदा कम्प्युटरमा गेम खेलेर समय बिताउने गरेको उनले बताए।
उनले राम्रो गर्नेहरूका लागि नेपाली चलचित्र क्षेत्र निकै फराकिलो र भविष्य राम्रो रहेको बताए। तर, त्यो व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा भएको उनले तर्क गरे।
‘काम कसरी गर्ने, कसरी दर्शकको मन जित्ने भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ पाए भन्दैमा जस्तो पनि काम गर्ने हो भने त्यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। काम सधैंभरिलाई गर्ने हो कि, केही समयको लागि मात्रै हो ? त्यो सोच्न जरुरी हुन्छ।’
अब आफूले छिट्टै काठमाडौंमा साथीहरूसँग मिलेर साइड बिजनेस गर्ने जानकारी उनले दिए।
‘हामी प्लानिङमै छौं, हामी चाहन्छौं त्यसले अरु धेरैलाई पनि लाभ मिलोस्,’ आकाशले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८, ०६:१७:००